၂၀၂၀ တုန်းက ဟော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ တက်သစ်စ ကိုရီးယားမင်းသားများ – MyStyle Myanmar
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာလည်း တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေက တစ်ကမ္ဘာလုံးကို လွှမ်းမိုးထားလို့နေဆဲပါပဲ။ ဒီအထဲမှာမှ ဇာတ်လမ်းတွေနည်းတူ မင်းသားအများအပြားကလည်း အင်မတန်ကို လူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်မင်းသားတွေကတော့ ဘယ်ဇာတ်လမ်းလေးတွေနဲ့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုကို လက်ခံရရှိခဲ့ပြီးတော့ ၂၀၂၀ တုန်းက ဟော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ တက်သစ်စမင်းသားစာရင်းထဲမှာ ပါဝင်နေသလဲဆိုတာကို အခုပဲကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။
“Good Manager” ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ ပထမဦးဆုံး ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် သုံးနှစ်ဝန်းကျင်သာ အနုပညာလောကမှ ကျင်လည်နေသေးတာဆိုပေမယ့်လည်း မင်းသားအဖြစ်မလုပ်ကိုင်ခင်ကတည်းက Kim Seon Ho ဟာ သူ့ရဲ့ပြဇာတ်တွေကို ကြည့်နိုင်ဖို့အတွက် တန်းစီပြီးလတ်မှတ်ဝယ်ရလောက်တဲ့အထိကို ပြဇာတ်လောကမှာ ကျော်ကြားနေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
မနှစ်တုန်းက Suzy, Nam Joo Hyuk တို့နဲ့အတူ “Start-Up” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ပါးချိုင့်လေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မင်းသားတစ်ဦးအဖြစ် ပရိတ်သတ်တွေကြားမှာ လူသိများလာခဲ့ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲပြီးသွားလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတဲ့ ပရိတ်သတ်များအနေနဲ့ KBS မှ အပတ်စဥ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ “2 Days and 1 Night” Variety Show မှာ သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသေးတယ်််။
2. Young Dae
Kim Young Dae ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို အရင်တုန်းက ကြည့်ခဲ့ဖူးလောက်ပေမယ့် သေချာမှတ်မိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့ “The Item,” “Welcome to Waikiki S2,” “Extraordinary You,” “The Penthouse,” “Cheat On Me, If You Can” ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့အတူ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အာရုံကို ဖမ်းစားလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
“Hotel Del Luna” ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ ပရိတ်သတ်တွေအထူးသနားချစ်ခင်ခဲ့ရတဲ့ ပိုးစုန်းကြူးလေး Lee Do Hyun ကတော့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တုန်းကလည်း “18 Again” ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ မင်းသား Yoon Sang Hyun မင်းသမီး Kim Ha Neul တို့နဲ့အတူ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရင်း ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို ထပ်မံရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။
Lee Do Hyun နဲ့အတူ “18 Again” ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ အတူပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Hwang In Yeob ကတော့ မနှစ်တုန်းကမှ သရုပ်ဆောင်အဖြစ် စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့်လည်း လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ဟော့ဖြစ်တဲ့စတားစာရင်းထဲမှာ ပါဝင်နေပါပြီ။ ခပ်ဆိုးဆိုးကောင်လေးဇာတ်ကောင်တွေကို ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး လတ်တလောမှာလည်း tvN ရဲ့ “True Beauty” ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ ဒုတိယမင်းသားအနေနဲ့ ပျိုမေတို့အသည်းကို ဖမ်းစားထားပါတယ်။
ကိုယ်တွေရဲ့မုဆိုးမလေး Jang Dong Yoon တစ်ယောက်ကတော့ သတင်းမှာပါလာရင်းကနေ မင်းသားအဖြစ်စတင်လုပ်ကိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးရရှိခဲ့တာပါ။ ထိုမှတဆင့် ဇာတ်လမ်းတွဲလေးတွေထဲမှာ စတင်သရုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီး မနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “The Tale of Nokdu” မှာတော့ မုဆိုးမဇာတ်ကောင်အတွက် မိန်းကလေးအဝတ်အစားတွေဝတ်ပြီး သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့အလှအပကြောင့် ပိုပြီးကျော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။ ထိုဇာတ်ကားပြီးနောက် “Search” ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားထဲမှာ အထူးတပ်ဖွဲ့ တပ်ကြပ်ကြီးအဖြစ်နဲ့ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။
“Itaewon Class” ကို ကြည့်ဖူးကြတဲ့သူတိုင်း မင်းသား Park Seo Joon အပြင် ဗီလိန်ဇာတ်ကောင်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Ahn Bo Hyun ကိုလည်း အထူးသတိထားမိကြမှာပါ။ မကြာသေးခင်ကမှ ထွက်ရှိထားတဲ့ “Kairos” ဇာတ်လမ်းထဲမှာလည်း Seo Do Kyun အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသေးလို့ ပရိတ်သတ်များရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
WWW ဇာတ်ကားနဲ့ စပြီးလူသိများလာခဲ့တဲ့ Lee Jae Wook ဟာဆိုရင် ပထမဦးဆုံး ခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ “Do Do Sol Sol La La Sol” ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ ပိုပြီးပရိတ်သတ်တွေ မှတ်မိစေခဲ့ပါတယ်။ စန္ဒယားတီးတဲ့ကောင်မလေးကို မြင်မြင်ချင်းသဘောကျသွားတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသားကောင်လေးအဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ရိုဆန်ဆန်ဇာတ်ကားလေးကိုမှ သဘောကျတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအနေနဲ့ ဒီကားလေးကို ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်လိုက်ပါ။
SBS မှ ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ “Dr. Romantic 2” ထဲမှာ ထက်မြက်တဲ့ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Ahn Hyo Seop ကတော့ သူ့ရဲ့စူးနက်နက်အကြည့်၊ မြင့်မားတဲ့အရပ်၊ ဇာတ်ကောင်ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်မှုတို့ကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေ မမှတ်မိဘဲ မနေနိုင်အောင် ဟော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Webcomic ကို အခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ “The Uncanny Counter” ဇာတ်လမ်းတွဲကတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ ပရိတ်သတ်တွေကြား ရေပန်းစားလျက်ရှိနေပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ကားတိုက်မှုကြောင့် မိဘနှစ်ပါးကို တစ်ပြိုင်နက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီး တစ်ယောက်တည်းအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသားလေး So Mun အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ထိုကားတိုက်မှုနောက်ကွယ်က အမှန်တရားကို ကျန်တဲ့အဖွဲ့သားလေးယောက်နဲ့အတူ ရှာဖွေကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
MyStyle Myanmar2021-01-23T15:28:23+06:30January 23rd, 2021|Celebrity News, Stars & Style|
ဆယ်ကျော်သက်အနေနဲ့ အမှတ်ရဆဲ ဖြစ်ပေမယ့် ၂၀၂၁ မှာ အသက် ၃၀ ပြည့်တော့မယ့် Cele များ
၂၀၂၁ ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး တရုတ်မင်းသမီး ၅ ယောက်
ထူးခြားပြီး ညို့ငင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ မျက်ဝန်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အမျိုးသမီး အနုပညာရှင် (၁၀) ဦး
နာမည်ကျော် ကိုးရီးယား အမျိုးသမီး အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ဆံပင်အတို စတိုင်များ
Fashion ပုံစံ သူများနဲ့ မတူဘဲ တမူထူးခြားနေတတ်တဲ့ Kpop Idol (၁၁) ဦး
သင်ကိုယ်တိုင် လိုက်လုပ်နိုင်မယ့် Kpop Idol တွေရဲ့ ဆံပင်စည်းနည်း စတိုင်များ